ရွှေမန်းကသန်းနှစ်သန်း – Pann Satt Lann Books
မႏၲေလးၿမိဳ႕ အၿငိမ့္ေလာကမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားၿပီး ပရိသတ္ရင္ထဲစြဲဆဲျဖစ္တဲ့ အၿငိမ့္ မင္းသမီး ၃ လက္ရွိပါတယ္။ “ သန္းသုံးသန္း ” ဆိုၿပီး အမွတ္သညာျပဳၾကပါတယ္။ အဲဒီ အၿငိမ့္မင္းသမီး ၃ လက္ကေတာ့ ( ေဒၚ ) မ်ိဳးခ်စ္သန္း၊ ေ႐ႊမန္းသူ ( ေဒၚ ) ျမင့္ျမင့္သန္းနဲ႔ ( ေဒၚ ) ထိပ္သီးသန္းသန္းတို႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ မင္းသမီး ၃ လက္ထဲမွ ေ႐ႊမန္းသူ ( ေဒၚ ) ျမင့္ျမင့္သန္းနဲ႔ ( ေဒၚ ) ထိပ္သီးသန္းသန္းတို႔အေၾကာင္းကို ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘင္တကၠသိုလ္လို႔ တင္စားၾကတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ဟိုအရင္က အၿငိမ့္အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ ၃၀ ေက်ာ္စလုံး မကရတဲ့ ညက ခပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အမွန္ပါ။ အခုေတာ့ အၿငိမ့္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သာက်န္ပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာ့ သဘင္ေလာက ( အထူးသျဖင့္ အၿငိမ့္ေလာက ) က နိမ့္ပါးဆုတ္ယုတ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသလို ႏွေမ်ာစရာလဲ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေရးသားလိုက္တဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေ႐ႊမန္းသူ ( ေဒၚ ) ျမင့္ျမင့္သန္းအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပသူ ( third person ) အေနျဖင့္ေရးသားထားၿပီး အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ( ေဒၚ ) ထိပ္သီးသန္းသန္း အေၾကာင္းကို ေျပာသူ ( first person ) အေနျဖင့္ ေရးသားထားပါတယ္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕က အထင္ကရ လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီး ( ဦး ) ခ်စ္စရာ၊ ( ဦး ) ထင္ေပၚ၊ စာေရးဆရာ ဥဳံဖြ၊ ဒီဇိုင္နာထြန္းထြန္းလင္းတို႔ရဲ႕ အမွတ္တရစာမ်ားကိုလဲ ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အၿငိမ့္မင္းသမီးႀကီး ၂ ေယာက္ရဲ႕ ေရာင္စုံဓာတ္ပုံမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ဧယင္က်ဴးနဲ႔ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳးသီခ်င္း၊ ဗုံေထာက္၊ ေတးထပ္၊ ငိုခ်င္းတို၊ ငိုခ်င္းရွည္ ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုလည္း မွတ္သားဖြယ္ရာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5.5 × 0.7 × 8.5 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2020 နိုဝင်ဘာလ၊ (ပ-ကြိမ်)
ရွှေမန်းကသန်းနှစ်သန်း အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
Mon Halsey – October 25, 2020
မားအလိမ္မာရဲ့ တတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် ..သဘင်တက္ကသိုလ်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့မန္တလေးမြို့က အငြိမ့်မင်းသမီးကြီး နှစ်ဦးရဲ့အကြောင်းကို ရေးသားထားတာပါ ..
ကျွန်မက သဘင်ပညာကို ထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့.. သဘင်ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ နယ်ပယ်မဟုတ်လို့ အခုရေးလိုက်တဲ့စာမှာတောင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေမှားမိမှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်
ဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကို စာရေးသူကြောင့်သာ သိခဲ့ရတဲ့အတွက် စာရေးသူကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်..
ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေဟာ..တကယ်ကို ကျွန်မတို့အတွက်.. လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် စာကြည့်တိုက်ထဲမှာရှိကိုရှိရမဲ့..စာအုပ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ..ခေတ်အဆက်ဆက် အမြဲ ကိုးကားနေရမဲ့ Reference Book လို.. စာအုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပါတဲ့..အငြိမ့်မင်းသမီးကြီး ထိပ်သီးသန်းသန်း ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ရတာ စာအုပ်ဆုံးသွားလို့..ဆုံးသွားမှန်းတောင်မသိလိုက်မိပါဘူး ..
ဧယင်ကျူးခြင်းဟာပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ယခင်ကတည်းကသိခဲ့ဖူးတာမှန်ပေမဲ့..အခုတော့ ဧယင်ကျုးတာကတောင်..
ဘယ်သူသေရင် ဘယ်လိုကျူးရတယ်..အမလေးဆိုတဲ့ အသံချင်းတောင် မတူပါဘူး.. ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေသိလိုက်ရပါတယ်..
ဒီပညာသည်မင်းသမီးကြီးတွေဟာ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်လည်းကောင်းရတယ် အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး ဘာမှ..ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိရင်တောင်..ရုတ်တရက်ဇာတ်ကွက်တွေဖန်တီးရတာ..ဇာတ်စီးရတာတွေကို ဖတ်ရတော့ လေးစားစရာပညာရှင်တွေပါရယ်လားလို့ ဦးညွတ်မိရပါတယ်
ကျွန်မကြိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာကလေးတစ်ခုက..မင်းသမီးကိုချိုးချင်တဲ့သူဌေး..တစ်ယောက်က…သူ့ရွာမှာ…ဧယင်ကျူးဖို့..စရံငွေကိုပုံပေးပြီး မင်းသမီးကိုငှားခဲ့ပါတယ် ..ဟိုရောက်တော့ ဘယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းပျံလွန်တော်မူမနေသလို ဘယ်သူမှလည်း ကွယ်လွန်မနေခဲ့ပါဘူး ..
နောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ ..မင်သမီးကိုစိတ်ခုနေတဲ့သူဌေးက..သူ့အိမ်က..ကြက်တူရွေးကလေးကို မင်းသမီးရှေ့မှာတင်..ရိုက်သတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကြက်တူရွေးမသာကို..ဧယင်ကျူးဖို့ပြောလာပါတော့တယ်
ပညာမာနရှိတဲ့ မင်းသမီးဟာလူရွှင်တော်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး.. ကျေးသားအဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး ဧယင်ကျူးလိုက်တာ နောက်ဆုံးမှာမင်းသမီးကို..ချိုးချင်တဲ့ သူကိုယ်တိုင်ချုံးပွဲချ..ငိုချပြီး ဧယင်ကျူးခငွေအပြည့်ပေးလိုက်တဲ့အပြင် ထမင်းပွဲနဲ့ပါ..ဧည့်ခံလိုက်ပါသေးတယ်တဲ့..
ကိုယ်နဲ့ လုံးဝကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့..နယ်ပယ်တစ်ခုက စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတွေ သိရတယ်ဆိုတာ..ရေးပေးတဲ့သူရှိလို့ပါပဲ ..ဒါကြောင့်ဆရာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
အရင်ခေတ်တုန်းကမန္တလေးမှာအငြိမ့်တွေဟာ အခု ၃၀ လောက်ရှိပါတယ်.. အငြိမ့်တိုင်း..အငြိမ့်တိုင်း.. ပွဲမကရတဲ့ညဆိုတာမရှိပါဘူး ..တစ်လကိုပွဲလေးဆယ်ကျော် နေ့ရောညပါ..ကရတာပါတဲ့ ..အခုတော့..အငြိမ့်အဖွဲ့တွေလည်း.. နည်းလာပါပြီတဲ့..
သဘောပေါက်မိတာက အရင်ခေတ်အခါက ဒေါင်ဒေါင်မြည်တယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေပေါ်ထွန်းခဲ့တာဟာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထက်.. တကယ့်ပညာကိုသာ အားကိုးပြီး
ကြိုးစားခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ..ဒီခေတ်မှာတော့..ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတွေ ပေါ်လာတာနဲ့အတူ ပံ့ပိုးမှုတွေလည်း..အားကောင်းလာတဲ့အခါ..တကယ့်အနှစ်တွေ..ခါးပြတ်သလို ကျန်ခဲ့မှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်..ဒီစာအုပ်ကလေးဟာ ကွက်လပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ကျွန်မကတော့မြင်မိပါတယ်..
Aung Zin Soe – November 9, 2020
” ရွှေမန်းက သန်းနှစ်သန်း ”
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ချင်လွန်းလို့ ပန်းဆက်လမ်းကနေ Pre order တင်လို့ရတဲ့ October2ကတည်းက
Pre order တင်ပြီး မှာခဲ့တာ
လက်ထဲကို စာအုပ်ရောက်ကတည်းက မနေနိုင်လို့
တစ်ခေတ်တစ်ခါက မန္တလေး အငြိမ့်လောကမှာ
မင်းသမီးကြီး (ဒေါ်)ရွှေမန်းသူမြင့်မြင့်သန်း နဲ့ (ဒေါ်)ထိပ်သီးသန်းသန်း တို့ရဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်….
ကောင်းကင်ကြိုး ၊ ရတု ၊ တေးထပ် ၊ ဧယဥ်ကျူးငိုခြင်းတွေ စာသားတွေနဲ့ပါ ဝေဝေဆာဆာ ထည့်ရေးထားပါတယ်
အနုပညာဆိုတာ ဘောင်ခတ်လို့ မရဘူး ဆိုတာကို
မင်းသမီးတို့ တတ်အပ်သော ပညာရပ် (၁၂)ရပ်ကို ၁နာရီကျော် ၂နာရီနီးပါး ကြာကြာ မပျင်းအောင် ကပြဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့ မင်းသမီး
အငြိမ့်ခုံပေါ်ကနေ ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ဟောပြောပွဲ စင်မြင့်ပေါ် ရောက်ရှိသွားတဲ့ မင်းသမီး
ဧယဥ်ကျူး ပညာရပ်ရဲ့ ခက်ခဲနက်နဲပုံကို ဘဝနဲ့ချီပြီး ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ မင်းသမီး
စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်….
မန္တလေး လူရွှင်တော်ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့
ဦးထင်ပေါ် တို့ရဲ့ အမှတ်တရစာလေးတွေလည်း ပါတော့ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားတာပေါ့…
မှတ်ချက်။ ။ ကျနော် မန္တလေး အငြိမ့်တွေကို မကြည့်ဖူးပါဘူး။ ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ ပလ္လင်အငြိမ့်၊ ခုတင်အငြိမ့်၊ စင်အငြိမ့် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရယ်
လူရွှင်တော် ဦးချစ်စရာ ရေးတဲ့ ကျွန်တော်သိမီသော လူရွှင်တော်ကြီးများနှင့် ကျွန်တော်နှင့် ခေတ်ပြိုင် လူရွှင်တော်များ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုပဲ ဖတ်ဖူးတာပါ
ဒါပေမယ့် ထိုစာအုပ် ၂ အုပ်စလုံးမှာက
မန္တလေး အငြိမ့် လူရွှင်တော်ကြီးများ အကြောင်းပဲ ရေးသားထားတာပါ
အခု ဆရာ မားအလိမ္မာရဲ့
ရွှေမန်းက သန်းနှစ်သန်း စာအုပ်မှာတော့
မန္တလေး အငြိမ့်မင်းသမီးကြီး နှစ်ဦးရဲ့ ဘဝတွေကို ရေးသားထားတာပါ
မင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ အနုပညာရွက်ပုန်းသီးလေးများ အတွက်တော့ ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်….
မေတ္တာအရင်းခံပြီးတော့ စေတနာမှန်မှန်နဲ့ လုပ်ရင် ပိုပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ် ဆိုတဲ့ အသိကို ရခဲ့တာပဲ…..